पुरातन समयका देखि, मान्छे राष्ट्रिय संकेत विशेष ध्यान। तिनीहरूलाई प्रत्येक केही लागि चेतावनी लगे वा आगामी घटनाहरू तपाईंलाई सूचित। यो राष्ट्रिय संकेत धन्यवाद अनावश्यक घटनाहरू आफैलाई चेतावनी र तिनीहरूलाई रोक्न कदम लिन सक्छ छ। हाम्रो जीवनमा हामी गाला जल दुखेको खुट्टा, itchy हात जस्ता लक्षण सामना। संकेत मानव शरीर सम्बन्धी संग, त्यहाँ दिइएको अवधिमा प्रकृति वा जनावरहरूको व्यवहार मा ठाउँ लिन भनेर केही संचालन संग जोडिएको हुन् ती छन्। तिनीहरूलाई को विशाल संख्या बीचमा यो मतलब के itchy गर्दा कान बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ, यो भावना छैन सुखद सकिन्छ। तर, यदि तपाईं हाम्रो पुर्खाहरूको आवाज सुन्न, धेरै सिक्न सकिन्छ। र यो विश्वास वा राष्ट्रिय संकेत मा - व्यक्ति मा सम्पूर्ण निर्भर गर्दछ।
त्यसैले, "खुजली कान" को संकेत लागि त्यहाँ धेरै व्याख्याहरु छन्। सबै भन्दा साधारण कुनै पनि समाचार पूर्वचित्रण कि छ। यसबाहेक, तिनीहरूले असल र खराब दुवै हुन सक्छ। समाचार - यो मामला मा, यो कुनै पनि कार्य, हाम्रो जीवनमा निरन्तर केही जानकारी प्राप्त गर्न थप बस मा जा रहेको छ, वा, किनभने लिन गाह्रो छ। त्यसैले, यो व्याख्या सबैभन्दा इमानदार मानिन्छ।
धेरै व्याख्याहरु मा प्रश्न, जवाफ को लागि खोजी गर्दा, गर्न सकिँदैन फेला "कान खुजली छन् के?" - साथीहरूसँग नवजात गर्न। यस मामला मा, सबै अरूको स्मृति सार्न, र एक बच्चा जन्मन सक्छ तिनीहरूलाई को एक मान धेरै सजिलो। त्यहाँ कुनै पनि छन् भने, त्यसपछि तपाईं उदाहरणका लागि, अन्य विकल्प, विचार गर्नुपर्छ "कसैले तपाईंलाई गाली हुनेछ।" यस्तो व्याख्या आनन्द छैन, तर यो दिन सबै कार्यहरू एक reassessment बनाउन सक्छ, यो कार्यान्वयन नगर्न सम्भव छ।
Omen "खुजली कान" अवसर खर्च केही नगद एक चेतावनी हो। यो चेतावनी सुन्ने, एक व्यक्ति नैतिक एक विशिष्ट घटना, आफ्नो पैसा को प्रवाह संग सम्बन्धित नै मिलाउँछ। र यो हुन्छ जब, धेरै सजिलो सहन छ। पहिले नै आफ्नो कार्यान्वयन प्रतीक्षा - आखिर, उहाँले यस्तो eventuality, यसबाहेक लागि तयार छ।
सायद यी संकेत हास्यास्पद र निरर्थक कसैले जस्तो देखिन्छ। धेरै यो मात्र संयोग हो भनेर तर्क गर्न सक्छ। तथापि, तिनीहरूले पूर्ण बेवास्ता गर्नुहोस्। तिनीहरूले पालन र शताब्दीयौंदेखि संकलित थिए। र सबै भन्दा अवस्थामा तिनीहरूले निश्चय छ विश्वास मलाई।
ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मान्छे, भनेर खुजली कान छन् भने, त्यसपछि वर्षा लागि प्रतीक्षा विश्वास गर्छन्। खेती, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ स्वीकार गर्न सुन्नुहोस्। एक तरकारी बगैचा - यो विशेष गरी यदि लामो समय, कुनै को संभावना र गाउँलेहरू लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण ठूलो समाचार छ। र, पक्कै पनि, यो समाचार धेरै सुखद छ। को संकेत यस व्याख्या गर्न साथै, त्यहाँ पनि मौसम अवस्था जोडिएको छ जो अर्को छ। उदाहरणका लागि, वसन्त वा गर्मी समयमा जन्म ती लागि, यो आउँदै वार्मिंग भन्ने हो। शरद ऋतु वा हिउँदमा ती को खुजली कान जो जन्म थिए भने, उपचार फरक अर्थ छ, र मौसम ठंडा को दिशा मा परिवर्तन समावेश छ।
साथै, हामी व्याख्याहरु खोज्न यदि Omen, यहाँ भूमिका खेल्छ "के itchy कान?" - वार्मिंग गर्न - .. धेरै बाँकी pinna को जन्म अवधि बिना चिसो मौसम को शुरू भएको, र सही अघि itches भनेर विश्वास जो मेरो कान।
अधिकांश मानिसहरू मानिसहरूको संकेत विश्वास र, केही घटनाहरू को कार्यन्वयनका लागि प्रतीक्षा, आफ्नो कान scratching। तर तार्किक लाग्छ भने, त्यसपछि यो सम्भव अर्को व्याख्या फेला पार्न छ। उदाहरणका लागि, तपाईं कान कान को बाली भने, यो scratched र यो धातु निकाय घृणाको बाट हुन सक्छ। जो चिकित्सकीय निर्धारण गर्न सकिँदैन एलर्जी वा कुनै पनि जलन को एक परिणाम, - तपाईं एक सय प्रतिशत यो मामला, त्यसपछि सायद कान चिलाउनु छैन भनी निश्चित हुनुहुन्छ भने।
चिहान हिज्जे: वर्णन, सञ्चालन सिद्धान्त, विशेषताहरु र नतिजा
रुनिक omens। Runes र आफ्नो अर्थ को संयोजन, निहितार्थ privorotov
सोची को सबै भन्दा राम्रो रेस्टुरेन्ट: मूल्याङ्कन, वर्णन र ग्राहक समीक्षा
के diss बारेमा थप जान्न
गर्मीको निवासको लागि लालटेन: छनौटका विशेषताहरू
मोटर गाडीको अगाडीको शिशा वशर तरल पदार्थ जाडो: प्रकार, निर्माता, संरचना र प्रतिक्रिया। आफ्नो हातले गाडीको अगाडीको शिशा वशर तरल पदार्थ जाडो